Emirates na-ebighachi ụgbọ elu ndị njem na Lagos na Abuja
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Emirates na-ebighachi ụgbọ elu ndị njem na Lagos na Abuja
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • Akụkọ Na -eme Nigeria • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ na -agbasa UAE • Akụkọ dị iche iche
Emirates ekwuputala na ọ ga-amalite ọrụ ndị njem na Lagos (7 Septemba) na Abuja (9 Septemba) na Nigeria. Ighaghachi ụgbọ elu na obodo abụọ nke Nigeria na-ewere ọdụm African Emirates gaa ebe 13, ebe ụgbọ elu ahụ na-agbasi mbọ ike iji nyere ndị ahịa ya aka ịga nke ọma na ntụkwasị obi, na-etinye usoro ahụike na nchekwa ụlọ ọrụ na-eduga n'akụkụ niile nke njem njem ahụ.
Gbọ elu na Legọs ga-arụ ọrụ ugboro anọ n'izu na Mọnde, Wenezdee, Fraịdee na Sọnde. Gbọ elu na-esi Abuja aga ọrụ kwa ụbọchị.
Ndị njem si obodo abụọ dị na Naịjirịa na Amerika, Europe, Middle East na Asia Pacific nwere ike ịnwe njikọ dị mma ma dị mma site na Dubai, ndị ahịa nwere ike ịkwụsị ma ọ bụ gaa Dubai n'ihi na emegheela obodo ahụ maka azụmahịa mba na ndị ọbịa.
Gbaa mbọ hụ na nchekwa nke ndị njem, ndị ọbịa, na ndị obodo, nyocha COVID-19 PCR dị mkpa maka ndị njem na-abata na ndị njem na-abịa Dubai (na UAE), gụnyere ụmụ amaala UAE, ndị bi na ndị njem, n'agbanyeghị mba ha na-abịa .